Ny tavoahangin-drano tsara indrindra ho an'ny alika: hydrated foana ny biby fiompinao | Tontolo alika
Rehefa mandeha mitsangatsangana na mihazakazaka ianao dia mazàna mitondra tavoahangin-drano iray hamonoana ny tenanao mba tsy hijaly ny vatanao amin'ny fampihetseham-batana ataonao. Raha ny alika dia ilaina ihany koa, fa, Iza amin'ireo tavoahangy ho an'ny alika no tsara indrindra?
Ireto ambany ireto dia manome anao ohatra amin'ny tavoahangin'alika ary koa torolàlana ahafahanao mianatra bebe kokoa momba ity fitaovana ity fa hadino nefa tena manan-danja tokoa ho an'ny biby fiompinao sy ny fanondrony.
1 Ny tavoahangin-drano tsara indrindra ho an'ny alika
2 Fomba hisafidianana tavoahangy rano ho an'ny alika
3 Maninona no zava-dehibe ny mitondra tavoahangy rano ho an'ny alika mandritra ny diabe
4 Rahoviana isika no tsy maintsy manome rano alika?
5 Ahoana ny fiasan'ny mpanondraka alika azo entina
6 Tsy maintsy atao ve ny mitondra tavoahangy misy rano hanadiovana ny ranon'alika alika?
7 Aiza no hividianana rano iray tavoahangy ho an'ny alika
Ny tavoahangin-drano tsara indrindra ho an'ny alika
Ity misy safidy iray amin'ireo tavoahangin-drano tianay indrindra ho an'ny alika:
Tavoahangy Makerfire ho an'ny ...
Tavoahangy rano BePetMia ...
Fomba hisafidianana tavoahangy rano ho an'ny alika
Rehefa mividy rano tavoahangy ho an'ny alika dia mila manisa toetra maromaro ianao hahamarinanao azy tsara. Ireto no zava-dehibe indrindra sy izay amporisihanay anao handinika:
fahafahana: Ny fahaiza-manao dia iray amin'ireo fanalahidy. Tsy tokony hihevitra ny haben'ny alikanao sy ny fotoana an-tongotra fotsiny ianao na fanatanjahan-tena izay hataonao, fa koa ireo fampiasana hafa azonao omena azy. Ohatra, azo ampiasaina hisotro rano, hanadiovana ny ranon'alika, handresena lahatra ny fihetsika tsy mendrika (mivovo, manandrana manafika sns).
Fitaovana: Ny fampiasa matetika amin'ny tavoahangin-drano ho an'ny alika dia matetika ny PVC, plastika mafy sy mahatohitra izay haharitra anao ela. Ny olana dia izy io, rehefa mandeha ny fotoana, dia mety manana fofona. Safidy iray hafa dia ny vy na vy, izay matetika no madio kokoa ary mora diovina sy tsy simba.
Miaraka amin'ny mpisotro anaty: Ny tavoahangin-drano sasany ho an'ny alika dia manana rafi-pisotro efa niorina, ohatra ireo izay endrika sotro na misy kaontenera manampy hameno rano azy.
Maninona no zava-dehibe ny mitondra tavoahangy rano ho an'ny alika mandritra ny diabe
Rehefa mandeha mitsangatsangana ianao, na manao fanatanjahan-tena any ivelany dia makà rano iray tavoahangy hidiran'ny rano. Mazava ho azy fa manana tombony maro hafa izy io, toy ny fisorohana ny fisehoan'ny fanaintainana mahatsiravina, na ny fanatsarana ny fanoherana ny vatana.
Raha ny alika dia zavatra mitovy no mitranga. Miasa mafy koa izy ireo rehefa mandeha na mihazakazaka, ary Tsy andrin'izy ireo ny hisotro rano any an-trano Indrindra satria mety hiteraka olana lehibe ianao (rehefa misotro haingana ny alika, dia mety manana lasantsy, olana kendaina na mamily vavony mihitsy aza, ny zavatra matotra indrindra mety hitranga amin'izy ireo).
Ho fanampin'izany, io tavoahangin-drano io dia mety misy fampiasa hafa ihany koa, toy ny fanakiviana ny biby fiompinao raha manomboka mihombo izy na te hifanandrina amin'ny alika hafa (na arovy amin'ny alika hafa amin'ny alatsany rano aminy); na hanadio ny ranon’alika alika eny an-dalambe.
Rahoviana isika no tsy maintsy manome rano alika?
Mila rano ny alika rehefa mangetaheta. Ary izany dia mitranga rehefa manao fanatanjahan-tena ny biby, rehefa mafana be, raha manavy ... Na vehivavy aza, amin'ny fampinonoana, fihetseham-po na amin'ny hafanana dia mety mila rano bebe kokoa noho ny tamin'ny fotoana hafa.
Saingy, tokony hifantoka amin'ny hetsika an-tongotra sy fanatanjahan-tena ianao omeo zava-pisotro izy alohan'ny hanombohany (vola kely ary miandry fotoana fohy alohan'ny hanombohana ny diany na ny fanazaran-tena mba tsy hahatsapana ho ratsy), rehefa miala sasatra ianao (tsy eo noho eo, fa rehefa afaka kelikely dia milamina izy); ary rehefa mody an-trano (indray tsy eo noho eo izany).
Zava-dehibe ny hahatsiarovanao izany ny alika dia tsy tokony hisotro avy hatrany aorian'ny fampiharana Satria, ny faniriana hisotro, dia mety hahatonga anao handoa na zavatra ratsy mety hitranga.
Ahoana ny fiasan'ny mpanondraka alika azo entina
Efa nahita mpantsaka alika azo entina ve ianao? Ireo dia noforonina tamin'ny fomba roa samy hafa. Amin'ny lafiny iray, ho fitoeran-javatra fanampiny manampy anao hofeno rano hahafahan'ny biby misotro izay tiany. Io koa dia ahafahanao manampy zavatra hohanina raha toa ka tsy eo an-trano mandritra ny fotoana maharitra ianao.
Etsy ankilany, manana ny tavoahangy ho an'ny alika manana endrika tahaka ny ladle koa ianao, izany hoe cekina izy ireo ka, amin'ny fanindriana bokotra iray, dia miangona ao aminy ny rano ka afaka misotro mora foana ilay biby.
Miankina amin'ny haben'ny alika, karazana iray na iray hafa no atolotra. Ohatra, raha kely na salantsalany dia ampy ny tavoahangy misy sotro satria ampy ny rano itahirizana. Fa raha tianao ny manadio ny ranona, misotro na manitsy ny fitondran-tena, dia tsara kokoa ny iray lehibe kokoa miaraka amin'ny fitoeram-panampiana misy azy.
Tsy maintsy atao ve ny mitondra tavoahangy misy rano hanadiovana ny ranon'alika alika?
Hatramin'ny taona maro dia nisy tanàna maro, tamin'ny fiezahana hanatsara ny hatsarana (sy ny fofona) eny an-dalambe, nametraka fepetra takiana ho an'ny tompona alika izay ahitana tsy fanadiovana ny dikin-biby fotsiny, fa tsy maintsy manao toy izany koa amin'ny urination. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila mitondra zavatra hanadiovana ny ranon'alikao ianao.
Ny olana dia tsy ny Kaominina rehetra no mitaky izany. Misy ny manao izany, miaraka amin'ny onitra hatramin'ny 750 euro raha tratrany ianao nefa tsy dioviny; ary ny hafa tsy. Ohatra, tsy maintsy atao ny manadio ny ranona amin'ny rano (na ny fifangaroan'ny rano sy ny vinaingitra mahomby kokoa) ao Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Almería, Ceuta, Jaén, Mieres ...
Ny tsara indrindra dia ny manamarina raha toa ka tsy maintsy atao izany na tsia ao an-tanànanao, ary raha izany dia mitondra tavoahangy ho an'ny alika foana.
Aiza no hividianana rano iray tavoahangy ho an'ny alika
Ankehitriny rehefa fantatrao bebe kokoa ny fiasan'ny tavoahangin-drano alika, ary ny antony tsy maintsy ananana iray, ny zavatra manaraka ilainao dia ny mahafantatra hoe aiza no hividianana iray. Manome safidy anao ve izahay? Eto izahay dia manolotra fivarotana sasany ahafahanao mahazo azy ireo.
Amazon: Amazon dia, tsy isalasalana, ny magazay hahitanao karazany maro hafa, na amin'ny maodely, na isan-karazany, na habe, sns. Samy hafa be ny vidiny ka mifanaraka amin'ny teti-bola anananao izany.
kiwiko: Amin'ity tranga ity dia miresaka fivarotana iray manokana momba ny kojakoja momba ny biby izahay ary mazava ho azy fa afaka mahita tavoahangy mety ho an'ny alika ianao arakaraka ny habeny sy ny fotoana anateranao ny biby fiompinao.
Aliexpress: Safidy iray hafa, izay mitovy amin'ny Amazon, dia ny Aliexpress. Amin'izany ny vidiny dia mora vidy kokoa noho ny any amin'ny magazay hafa, saingy lava kokoa ihany koa ny fotoana fiandrasana. Na izany aza, raha tsy maika ianao, dia afaka manangona vola amin'ny fividianana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Tavoahangy rano alika